Samsung Galaxy M12 bụ ntinye ọhụrụ nwere batrị 6.000 mAh | Gam akporosis
Samsung Galaxy M12 bụ ntinye ọhụụ nwere batrị 6.000 mAh
Samsung igwe na-eto na afọ ọhụrụ a 2021 na mwepụta nke a onye ohuru nke usoro M akpọ Samsung Galaxy M12. Firmlọ ọrụ ahụ kwadoro ịnọgide na-enwe otu n'ime ahịrị na ya na A bụ ndị na-ewepụta ọnụ ọgụgụ dị oke mma na njedebe nke mmemme ọ bụla.
A mara ọkwa Samsung M12 Samsung na VietnamN'oge a ọ bụ mba ahụ ga-abata na mbụ, wee pụọ na mba ndị ọzọ, agbanyeghị na ha enyeghị ụbọchị ọ bụla. Ọ dị ka ọdụ ndị ọzọ na batrị ya, mana ọ bụghị naanị na nke ahụ, ọ na-ebuli ihe mmetụta anọ na azụ ya ma na-ejide nguzozi na ngwaike.
1 Samsung Galaxy M12, ihe niile gbasara ntinye ọhụụ
2 Batrị inye ma nara
Samsung Galaxy M12, ihe niile gbasara ntinye ọhụụ
El Samsung Galaxy M12 nwere ihuenyo 6,5-inch Site na mkpebi HD +, ogwe ahụ bụ Infinity-V ụdị PLS LCD na nha nke 20: 9. A na-akpọ bezel ahụ elu ma na elu, ọ bụghị ihe niile ga-abụ ihuenyo ka ọ na-eme na usoro ntinye ndị ọzọ.
Samsung ekwughị ihe nhazi ahụ, ọ bụ ezie na nzọ ihe niile na-egosi na ọ bụ Exynos 850 mara ọkwa na June 2020 dị ka etiti etiti yana Mali-G52 eserese eserese. Enwere ọtụtụ nhọrọ nchekwa RAM, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti 3, 4 na 6 GB, mgbe ị na nhọrọ nchekwa ị nwere ike ịhọrọ 32, 64 na 128 GB, na-enwe ike ịgbasa ya ruo 1 TB site na MicroSD.
Na azụ ya ọ na-egosi ihe mmetụta anọ, nke bu ihe bu 48pipixels, nke abuo bu uzo sara mbara nke bu 5 megapixels, ebe o na akwado ihe megapixel 2 na ihe omimi 2 megapixels. Na ihu oghere dị megapix 8 na ọkwa.
Batrị inye ma nara
Ọ bụrụ na ihe apụta Samsung Galaxy M12 Ọ dị na batrị nke ndị nrụpụta gụnyere, otu n'ime 6.000 mAh ka a họọrọ nke na-ekwe nkwa inwe ndụ bara uru karịa ụbọchị zuru ezu. Ọ dabara na nke a na-ahụ anya, ọ bụ ntinye ntinye na otu n'ime batrị kachasị na ahịa ma ndị ahịa na-enwe nnukwu ekele maka ya.
A ga-ebu ibu nke 6.000 mAh ahụ n'ihe dịka 15W, chaja ọ na-abịa bụ ụdị USB-C na ọ bụ otu n'ime ihe ngosi. Onye nrụpụta chọrọ ka enye ya ihe karịrị otu elekere, mana na ọsọ karịrị 10W nke Micro USB nwere.
Ọ na-enwu dị ka batrị dị na ngalaba njikọtaN'ịbụ onye ama ama 4G, ya na Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, GPS, njikọ USB-C 2.0 na jaketị isi. Kpọghe ga-eme dị ka na ọtụtụ ngwaọrụ n'akụkụ site na-enwe ike akara mkpisiaka agụ.
Akụrụngwa ọ na-abịa bụ gam akporo 10, sistemụ ahụ n'agbanyeghị na ọ bụghị gam akporo 11 na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma dabere na ụdị ị nwetara, ma jiri 3, 4 ma ọ bụ 6 GB nke RAM. Layer bụ Otu UI 2.0 na ekwentị ahụ na-ekwe nkwa imelite na gam akporo 11, mana ọ naghị enye ụbọchị a kapịrị ọnụ.
IKIRU 6.5-anụ ọhịa PLS LCD Infinity-V na mkpebi HD + (1.600 x 720 pikselụ) / Ọnụ: 20: 9
Nhazi Exynos 850 8-isi 2.0 GHz
Kaadị grafik Obere-G52
Nchekwa n'ime 32/64/128 GB / O nwere oghere MicroSD nke ruru 1 TB
Gbanwee CAMERA 48 MP Isi ihe mmetụta / 5 MP Wide Angle Sensor / 2 MP Macro Sensor / 2 MP Omimi ihe mmetụta
OS A gam akporo 10 nwere otu UI 2.0
UMUAKA 6.000 mAh na 15W ngwa ngwa
Njikọ 4G / Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / USB-C / GPS / Obere Jack
Mbibi na ibu ibu 164.0 x 75.9 x 9.7 millimeters / 221 gram
El Samsung Galaxy M12 ekwuputala ọkwa na agba atọ dị na ụzọ ọpụpụ ya, na ndo nke oji, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ, na-abata na Vietnam n'izu na-abịa. Ọnụahịa nke ụdị ndị nwere 3/32 GB, 4/64 GB na 6/128 GB akọwabeghị, mana a ga-amata ya site na Wednesde, 10 nke Febụwarị, ụbọchị ọ bịarutere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung Galaxy M12 bụ ntinye ọhụụ nwere batrị 6.000 mAh
Lụọ ọgụ na ụdị ngwa agha dị iche iche na FAU-G, nke ọmụmụ ndị India mepụtara
[Na vidiyo] Anyị nwalere Cyberpunk 2077's Ray Trace na Geforce UGBU a na Chrome